Okudingayo ukwakha iDredge eyenziwe ngokwezifiso - ama-Ellicott Dredges
Okudingayo Ukwakha Idizayini Enziwe Ngokwezifiso
Ku-2017, ikhasimende le-petrochemical laya ku-Ellicott Dredges mayelana nokwakhiwa kwe-Bucketwheel dredge kagesi eyenziwe ngokwezifiso. I-dredge eyenziwe ngokwezifiso kwakudingeka yakhelwe ukumelana nezimo ezinjengehlane. Ikhasimende likhethe i-Ellicott Dredges ngokuya ngesipiliyoni sika-Ellicott nedumela lakhe lokuklama nokwakha ama-dredges ukuze asebenze ezindaweni ezinzima nezinselele.
Ukuthola Isixazululo Senkinga Esematheni
Inselelo ebaluleke kakhulu iqembu ebibhekene nayo evela kwa-Ellicott kwakuyikhono lokuhambisa i-1MM lb. (453,592.3 kg) yangena phakathi emhlabeni. Ngesikhathi sezigaba zokuqala zephrojekthi, iqembu elivela esigabeni esikhulu se-Ellicott's Major Projects laqala ukusebenza futhi lathola isisombululo senkinga. Ngenxa yokucabanga okuthile kokudala, banquma ukuklama nokwakha idreyini elalingahlukaniswa, lihanjiswe kalula ngomgwaqo nolwandle, futhi baphinde bahlanganiswa endaweni yephrojekthi yekhasimende.
Yini Eyenza Lo Mngcele oBekiwe wehlukile?
I-dredge entsha eyenziwe ngezifiso ifakwe injini yokusika ka-Ellicott enelungelo lobunikazi le-Dual-Wheel Excavator (DWE) 94 600HP. Eqinisweni, imodeli yendabuko ye-DWE 94 dredge inenjini ye-150HP yokusika. Kodwa-ke, lo dredge othize ukhiqiza amandla aphindwe kane.
I-dredge izosebenzisa isikhathi sayo esiningi echibini likasawoti likhipha usawoti kanye ne-brine. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izinyawo ezimbalwa zokuqala zamanzi ziqukethe kakhulu isihlabathi. Le ngxenye yenqubo kulula ukuyiphatha. Kodwa-ke, ngaphansi kwesihlabathi kukhona idiphozi yamaminerali e-halite aqukethe cishe usawoti ongu-90% kasawoti. Eqinisweni, amaminerali anzima futhi adinga amandla akhuphukile avela kudoti oza nesipikha samasondo amabili. Lokhu kwenza kube lula ukuqhubeka nokumpompa usawoti kanye ne-brine.
Ngenxa yohlobo lomsebenzi obandakanyekile okokusebenza okubhalwe emgodini ulungele indawo enokonakala kakhulu. Izinto ongazikhetha ozifakile dredge zifaka:
Bolt-on-zinc-anode ezingashintshwa ziphume emphemeni.
Ama-radiator lawo manzi we-hydraulic fluid.
Amapayipi angenasici kanye nama-fasteners.
Izigaba zokugcina zephrojekthi
Ngemuva kokuchitha izinyanga eziningi ukuqoqa indawo eyenziwe ngogesi eyakhiwe ngokwezifiso ze-Bucketwheel kanye nokuhlolwa, iqembu elivela ku-Ellicott Dredges liyaziqhenya ngokumemezela ukuthi izigaba zokugcina sezakhiwe.
NgoMeyi, iqembu le-Ellicott Dredges laqedela ukwenziwa kwe-dredge. Izingxenye ezahlukahlukene zokudonswa kwempahla nezinye izakhi zathunyelwa zaze zaphuka ezitsheni zabe sezifakwa emkhunjini owawuyiswa ePort of Baltimore. Ngaphezu kwalokho, iqembu lika-Ellicott labunjiniyela benkonzo yasensimini abanolwazi lizotholakala esizeni ukusiza ikhasimende ngokuhlangana kosuku nokuqeqeshwa kwabasebenzi babo.